बलीराजाले कसलाई पठाएका थिए देउसी खेल्न ? | Daraundi Gorkha's No. 1 Newspaper Daraundi Gorkha's No. 1 Newspaper
| सोमवार, जेष्ठ १२, २०७७
बलीराजाले कसलाई पठाएका थिए देउसी खेल्न ?
Published On : ८ कार्तिक २०७६, शुक्रबार १०:२६
आहै भन भन भाइ हो ‘‘‘
देउसी रे ।
आहै राम्ररी भन ‘‘‘‘‘‘.
आहै स्वर मिलाइकन ‘‘‘‘
आहै देउसी रे भन ‘‘‘‘‘‘‘
आहै हामी त्यसै ‘‘‘‘‘‘..
आहै आएका होइनौं ‘‘‘‘‘..
‘बली राजाले पठाएको ‘..’
जब(जब ‘देउसी रे’ भाका गुञ्जन थाल्छ, हाम्रो मन रोमाञ्चकताले भरिन्छ । हाम्रा पाइलाहरु उमंगले नाच्न थाल्छ । हामी यसै यसै उद्वेलित हुनपुग्छौं ।
देउसी भट्याउँदा किन हामी उमंगित हुन्छौं ? किन हामीमा स्फूर्ति जाग्छ ?
किनभने देउसी हाम्रो उत्सवको गीत हो । उल्लासको गीत हो । उत्साहको गीत हो । यसमा हाम्रो आफ्नोपनको मिठास छ ।
सदियौंदेखि नेपाली समाजलाई उत्सवमय बनाइरहेको छ, देउसीले ।
देउसी तिहारमा प्रतिपदाको दिनदेखि केही दिनसम्म खेलिन्छ । यो लोक संगीतलाई कसले सुरु गरे ? यसमा भन्ने बलीराजा को हुन् ? उनले पठाएको भनेर आउने देउसीहरु त्यतिबेला को थिए ? उनले कसलाई भिक्षा माग्न पठाएका थिए ?
कसरी सुरु भयो देउसीको प्रचलन ?
देउसी भैलोको प्रचलन नेपालको मध्यकालदेखि सुरु भएको अनुमान गरिएको छ । यसमा आधिकारिक प्रमाण केही नभएको भएपनि किंवदन्तीहरुले जुम्लाका राजा बलीसँग यो संस्कृतिलाई जोड्ने गरेका छन् ।
जुम्लामा खस राज्यको पतन भएपछि एक जना बली नाम गरेका व्यक्ति जन्मिएका थिए । उनकी आमा उत्तर भारतको काश्मीरबाट गर्भिणी अवस्थामा नेपाल प्रवेश गरेकी थिइन् । नेपाल आएर जुम्लाको कल्लै भन्ने ठाउँमा एक थापा क्षत्रीको घरमा उनी बास बसेकी थिइन् ।
तीर्थ जान हिँडेकी उनी त्यही घरमा बास बसिन् । संकृतिविद् डा. जगमान गुरुङ ती महिला आफ्नै परिवारका सदस्यको गर्भ बोकेर आएको हुनसक्ने अनुमान गर्छन् । उनको तर्क छ ‘यदि त्यस्तो कुनै भइपरी नआएको भए गर्भिणी अवस्थामा घर छाडेर एक्लै तीर्थ जानको लागि कुनैपनि महिला हिँड्दैनन् । त्यसैले उनी आफ्नै पिता वा दाजुभाइको गर्भ बोकेपछि तिरस्कृत भएर घर छाडेको हुनसक्ने उनको अनुमान छ ।संस्कृतमा यो घटनालाई जनाउनको लागि ‘सपाद लक्ष्य खसदेश’ भनिएको छ । यसको अर्थ हो ‘सय घर भएको खसदेश’ । त्यसैका राजा थिए बली । तिनै थापा क्षत्रीको घरमा जन्मिएको शिशु हुर्कदै एवं बढ्दै गयो ।
एकदिन काश्मीरबाट आएका विद्वान तीर्थयात्री चन्दननाथले बलीलाई राजा हुन योग्य देखेर राजाविहीन त्यो गाउँको राजा घोषित गरे भन्ने किंवदन्ती पाइन्छ । उनी कल्लै गाउँमा जन्मिएकोले उनले आफ्नो वंशलाई पनि कल्याल वंशको नामबाट सुरु गरेका थिए ।
कसलाई पठाएका थिए बलीराजाले देउसी खेल्न ?
त्यतिबेला पनि पश्चिम नेपालमा दास(दासी प्रथा चलिरहेको थियो । त्यो केही समय अघिसम्म थियो भने अहिले पनि लुकिछिपी यो प्रथा पश्चिम नेपालमा सञ्चालनमा छ । यो प्रथा अनुसार आफ्नै छोरा छोरी वा कुनै गरिबको छोरा(छोरी किनेर मन्दिरमा बलि दिने गरिन्थ्यो । तर, पछि मन्दिरमा लगेर त्यसै छाड्ने संस्कृतिमा विकास हुँदै गयो ।
लक्ष्मी पूजाको दिन तिनै बली राजाले देवदास र देवदासीको बृत्तिका लागि भिक्षा माग्न घर घरमा जाने अनुमती दिए । उनीहरुलाई लक्ष्मीपूजाको दिनदेखि माग्न पाउने अधिकार दिएको र देउसीलाई अपमान नगर्न र सकेको भिक्षा दिन पनि उनले सबैलाई उर्दी जारी गरेका थिए ।
त्यतिबेला नै औशींको दिन भैली खेल्ने गरिएको थियो । भैलीको अर्थ तपाईको भलो होस् भन्ने हुन्छ । विशेषगरी भैली देवदासीहरुले औंशीको दिन मात्रै खेल्ने पर्व हो । देउसी कात्तिक शुक्ल प्रतिपदाको दिनदेखि खेलिन्छ ।
तिनै बलीराजाले पठाएका देवदासहरुले आफू आएको जानकारी दिनको लागि ‘देवदासी रे’ भन्न थाले । त्यसैको अपभ्रंश रुप देउसी रे हुन थालेको हो भन्ने मान्यतालाई संस्कृतिविद् डा. गुरुङले स्वीकारेका छन् ।
एउटा पौराणिक बली छन्, जो दानवहरुका राजा थिए । उनलाई भगवान विष्णुले देवताहरुलाई धेरै दुःख दिएको भनेर पाताल धसाएका थिए । पाताल धसाएपछि उनले भगवान विष्णुलाई आफू कहिले मत्र्यलोक आउन पाउँछु ? भनेर सोधे ।
मत्र्य लोकमा राज गरेका उनी सधैं पातालमा बस्न नसक्ने भनेपछि विष्णुले यम पञ्चकको पाँच दिन उनी मत्र्यलोक आउन पाउने अनुमती दिएको कुरा पौराणिक ग्रन्थहरुमा देख्न पाइन्छ ।
दानवराज बली सम्पत्तिमा एकदमै धनी थिए ।
त्यस्ता बलीले मत्र्यलोक आउन पाउने भएपछि देवता गणले पनि आफ्नो इज्जत जोगाउनकै लागि पनि बली आउने ५ दिन मत्र्यलोक झकिझकाउ बनाउन थाले । बलीले छाडेपनि मत्र्यलोक गरिब छैन भन्ने देखाउनको लागि सबैतिर उज्यालो बत्ती र झिलीमिली बनाएको पौराणिक भनाई छ ।
अर्काेतर्फ हामीकहाँ देउसीहरुलाई पठाउने बली भने ती पौराणिक कथाका बली होइनन् । हाम्रा धेरै चार्डपर्वहरु मध्यकालीन नेपालका विभिन्न घटनाहरुसँग जोडिएको पाईन्छ ।
साभार ः अनलाइनखबर
भारतबाट आएकाहरुको तत्काल पिसिआर परीक्षण हुनुपर्छ
शिव उप्रेती : शनिबार भारतबाट कञ्चनपुर हुदै १४ जना गोरखा आइपुगेका छन् । उनीहरुमध्य सात
सर्त र सीमा तोकी यार्सागुम्बा संकलनलाई खुल्ला गर
(टिप्पणी) शिव उप्रेती : कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या नेपालमा थपिदै गइरहेको छ । विशेषगरी यो
विश्वमा कोरोना भाईरसले निम्त्यायको समस्या र नेपालले अपनाउन सक्ने बिकल्पहरु
बद्री मास्के, गोरखा : १. विश्वमा कोरोना भाईरसको प्रभावः अहिले विश्वका बहुसंख्यक देशहरु कोरोना
कोभिड १९, मुस्लिम आयोग र मस्जिद मदर्साको अनुगमन
कोभिड(१९ को संक्रमणले विश्व आक्रान्त छ,मतमतान्तरलाइ थाती राख्दै ब्यक्तिगत र संस्थागत रुपमा यसको बिरुद्धमा
कोरोना संक्रमितको उपचार गराउँदा सुरक्षित रहने अभ्यास सिकाउँदै नेपाली सेना
गण्डकी प्रदेशको कांग्रेसका संसदीय दलका प्रबक्तामा प्रकाशचन्द्र दवाडी
गोरखा नगरपालिकाका दुईजनाको पिसिआर रिपोर्ट नेगेटिभ
गोरखा नगरपालिकाको क्वारेण्टाइनका २९ जना सहित १२९ जनाको पिसिआर रिपोर्ट नेगेटिभ
१५ दिन बनाउने भनिएको आईसियू गोरखा अस्पतालमा ४५ दिनमा पनि बनेन